China Volvo Generator Series mpanamboatra sy mpamatsy | Xinneng
Ny fahatsiarovan-tena momba ny tontolo iainana Volvo Gen Set ny famoahana azy io dia mifanaraka amin'ny fenitra EURO II na EURO III & EPA. Ny motera diesel VOLVO PENTA dia manome herinaratra diesel injeniera izay novokarin'ilay soedoà VOLVO PENTA malaza eran-tany.
Ny marika VOLVO dia natsangana tamin'ny taona 1927. Nandritra ny fotoana lava, ny marika matanjaka dia mifandraika amin'ireo soatoavina fototra telo ao aminy: ny kalitao, ny fiarovana ary ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Ny orinasan'ny vondrona VOLVO VOLVO PENTA dia variana amin'ny famokarana motera diesel indostrialy, fiara indostrialy ary vokatra maotera maotera an-dranomasina. Mandroso hatrany eo amin'ny sehatry ny motera misy varingarina enina sy ny teknikan'ny tsindrona solika elektronika sns.
Ny panneaux solaires (antsoina koa hoe modules cell solar) dia voangona miaraka amin'ny sela maro masoandro, izay tapany lehibe amin'ny rafitry ny herin'ny masoandro ary ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny rafi-masoandro. Manana tontolon'ny masoandro polycrystalline sy monocrystalline izahay.
Ny modely misy ny "E" dia miantona power gensets;
Soso-kevitra ny handray API CF na avo kokoamenaka, hafanana / viscosity an'ny 15W-40
Teo aloha: Trailer Type Generator